Dhageyso: In Ka Badan 20 Ruux Oo Ku Dhintay Qaraxyadii Galabta – Goobjoog News
Warbixin dheeri ah baa ka soo baxaysa weerarkii galabta oo Jimca ah ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan goobo dhowr tallaabo u jira isgoyska KM 4 ee gobolka Banaadir.
Qaraxyadda oo tiradoodu ay gaareysay saddex ayaa ka dhacay nawaaxiga Hoteelka Saxafi oo kamid ah hotellada ugu caansan ee caasimadda ku yaalla, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Labo kamid ah qaraxyada ayaa ka dhacay wadada hormarta Hoteelka iyo xarunta dambi baarista ciidanka Booliska Soomaaliya oo loo soo gaabiyo CID-da, gaar ahaan dhinaca wadada laamiga ah ee u dhaxeeysa Isgoysyuada KM4 iyo Zoobe.
Dad ku sugnaa goobta ayaa u sheegay mareegta Goobjoog News in Qaraxa labaad uu ka dhacay afaafka hore illinka laga galo Hoteel Saxafi, gaar ahaan albaabka ku yaalla wadada aadka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaasi oo ay Hoteelo kale ku yaallaan.
Illo wareedyo dhinaca caafimaadka iyo Booliska ah ayaa u xaqiijiyay Goobjoog News in 18 ruux oo shacab u badan ay ku geeriyootay, halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay.
Warar kale oo Goobjoog News heshay ayaa sheegaya in dhimashada ay ka badan tahay 30 ruux halka dhaawaca uu kor u dhaafayo 20 qof oo shacab u badan.
Ciidamada amaanka, gaar ahaan ilaalada Hotel Saxafi iyo CID-da ayaa toogasho ku diley rag hubeysan oo gaaraya illaa afar, kuwaasoo isku dayayay inay gudaha u galaan Hotelka kaddib qaraxyada.
Xarakada Al-Shabaab ee sida weyn uga soo horjeedda jiritaanka dowladda federaalka iyo joogitaanka ciidanka AMISOM iyo kuwa kale ee Ajaanibta ayaa durbadiiba dhabarka saaratay mas’uuliyadda weeraradaani oo labo kamid ah ay ahaayeen Ismiidaamin, sida ay sheegeen hay’addaha ammaanka qaabilsan.
Shalay oo Khamiis ahayd ayaa markii Qarax ka dhashay Miino lagu soo rakibay gaari oo ka dhacay degmada Xamar-wayne ee gobolka Banaadir lagu dilay Xilldhibaan ka tirsan Baarlamaanka HirShabeelle.
Mid kamid ah saraakiisha caafimaadka Amiin Ambalas ayaa ka hadlaya khasaaraha:
Kaydka Goobjoog Select Month December 2021 (18) November 2021 (142) October 2021 (168) September 2021 (194) August 2021 (169) July 2021 (150) June 2021 (128) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)